Market Research Association - Page3of9- Market Research Association
01-200326 , 01-200846
Second National Stakeholders’ Consultation for Trade Information Sector
ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်သော National Stakeholders’ Consultation ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့နှင့် ၂၉ ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန်မြို့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းရှိ UMFCCI ခန်းမတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး
Continue reading “Second National Stakeholders’ Consultation for Trade Information Sector”
International Chamber of Commerce/ ESOMAR ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများကို သဘောတူ လက်ခံခြင်း (Adoption of the ICC/ ESOMAR International Code)
ဈေးကွက်သုတေသန အသင်း၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယင်းအစည်းအဝေးကြီးတွင် ဈေးကွက်သုတေသန အသင်းနှင့် ESOMAR World Research တို့ Declaration of Adoption of the ICC/ ESOMAR International Code ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
Continue reading “International Chamber of Commerce/ ESOMAR ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများကို သဘောတူ လက်ခံခြင်း (Adoption of the ICC/ ESOMAR International Code)”
The Holding of 1st Annual General Meeting of Market Research Association (Yangon) at UMFCCI building on October 24, 2019
The first annual general meeting of Market Research Association (Yangon) was held at UMFCCI building on 24th of October, 2019. There were 194 participants. The list of participants are described below:
Continue reading “The Holding of 1st Annual General Meeting of Market Research Association (Yangon) at UMFCCI building on October 24, 2019”
Master Class: Outlier Insights and Storytelling
ဈေးကွက်သုတေသနအသင်း (ရန်ကုန်) ၏ ပထမအကြိမ်နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် UMFCCI ၌အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီး နေ့လည် ၁ နာရီတွင် Master Class အား ဆက်လက်ပို့ချခဲ့ပါသည်။
Continue reading “Master Class: Outlier Insights and Storytelling”
UN Women E-Tendering Portal
MRA ရုံးတှငျတာဝနျထမျးဆောငျရနျ တဈဦး အလိုရှိသညျ။
Vacancy Announcement – Head of Office
MRA elected new Executive Committee for 2020-22
မွနျမာ ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါ အကြိုးဆကျစဈတမျး ၊ ပို့ကုနျကဏ်ဍမြား ပွငျးထနျစှာထိုးနှကျခံရ
MYANMAR COVID-19 IMPACT SURVEY: EXPORT SECTORS TAKE A HIT
MRA supports National Export Strategy 2020-2025
Myanmar Living Conditions Survey 2017 : Socio-Economic Report (English)
copyright@2018 The market research association.All Right Reversed.